Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.5 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
Aprilပြီလ 2021, 1 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
"TOKYO OTA OPERA စီမံကိန်းထုတ်လုပ်သူ / စန္ဒယားပညာရှင် Takashi Yoshida"
အော်ပရာသည်ဂီတ၊ စာပေနှင့်အနုပညာအမျိုးအစားအသီးသီးမှပညာရှင်များဖန်တီးသော "ပြည့်စုံသောအနုပညာ" ဖြစ်သည်။TOKYO OTA OPERA စီမံကိန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးလူများအနေဖြင့်ထိုသို့သောအော်ပရာကိုခံစားနိုင်ခဲ့သည်။ထုတ်လုပ်သူနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ (အဆိုတော်နည်းပြ) ဖြစ်သည့်စစ်မှန်သော Ota ဆိ Mr. Mr. Takashi Yoshida ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
TOKYO OTA OPERA စီမံကိန်းအကြောင်း
"Die Fledermaus" အော်ပရာသည် Ota Citizen's Plaza ကြီးခန်းမတွင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည်
Yoshida ကို Ota Ward တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Ota ရပ်ကွက်တွင်ကြီးပြင်းလာကြောင်းကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသည်။ ဤစီမံကိန်းကိုအစပြုခဲ့ခြင်းမှာသင်ဘာကြောင့်ဖြစ်သနည်း။
"လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်တုန်းကငါ Ota Ward Hall Aplico မှာခန်းမလေးတစ်ခုငှားပြီး" Charles of Dash ဘုရင်မ "ကိုလွတ်လပ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်အားစောင့်ကြည့်သူနှင့်ထောက်ခံသူများရှိခဲ့သည်။ ခန်းမလေးတစ်ခု၊ A la Carte လို့ခေါ်တဲ့အော်ပရာအဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုကျွန်တော်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ခန်းမငယ်ဟုခေါ်သောရင်းနှီးသောအာကာသထဲမှထိပ်တန်းခေတ်အော်ပရာအဆိုတော်များ၏သီချင်းသံများနှင့်နည်းစနစ်များကိုနားထောင်ခြင်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးယင်းသည် ၁၀ နှစ်ကြာသည်။ငါကအခြားစီမံကိန်းအကြောင်းစဉ်းစားသောအခါ, ကချိုးသောကြောင့်, ဤ "TOKYO OTA OPERA စီမံကိန်း" နှင့်ပြောဆိုရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ "
ဒါဟာသံပြိုင်အဖွဲ့ ၀ င်တွေကိုအဓိကအားဖြင့်ရပ်ကွက်သားများကနေစုဆောင်းပြီးသုံးနှစ်စီမံကိန်းနဲ့အော်ပရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
"အော်တာရပ်ကွက်တွင်သံပြိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။ သံပြိုင်များသည်လူကြိုက်များသည်။ ရပ်ကွက်မှလူများသည်အော်ပရာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားရစေရန်သံစုံတီးဝိုင်းအဖြစ်ပါဝင်စေလိုသောကြောင့်သံပြိုင်အဖွဲ့ဝင်များသည်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ရလဒ်မှာပါဝင်သူများသည်အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၈၅ နှစ်ကြားရှိသူများနှင့်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ပထမနှစ်တွင် Johann Strauss ၏ "Komori" ၏အော်ပရာကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အော်ပရာအဆိုတော်တစ် ဦး ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုဖျော်ဖြေပွဲသည်လူတို့နှင့်အတူစန္ဒရားနှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဒါဟာသံပြိုင်အဖွဲ့ဝင်များအကြားစင်မြင့်အတွေ့အကြုံမှာခြားနားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်စင်မြင့်တစ်ခုကိုစည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။
သို့သော်ယခုနှစ်တွင် coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်မပြန့်ပွားစေရန်အတွက်သံစုံတီးဝိုင်းနှင့်အတူစီစဉ်ထားသည့် Gala ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
"စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် choir အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင် Zoom ကိုသုံးပြီးအွန်လိုင်းပို့ချချက်ကိုလုပ်နေတယ်။ ဖျော်ဖြေပွဲမှာငါသီဆိုဖို့စီစဉ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့အဓိကစကားလုံးတွေကိုအီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်။ အထူးတလည်သင်တန်းပို့ချသူများကို diction (vocalism) နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဟောပြောချက်များပေးရန်ဖိတ်ကြားသည်။ အဖွဲ့ဝင်အချို့သည်အစပိုင်းတွင်ရှုပ်ထွေးခဲ့သော်လည်းယခုထက်ဝက်ကျော်သည်အွန်လိုင်းတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ အွန်လိုင်း၏အားသာချက်မှာသင် မင်းရဲ့အချိန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်နောင်အနာဂတ်မှာငါအွန်လိုင်းပေါ်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့အွန်လိုင်းကိုပေါင်းစပ်တဲ့အလေ့အကျင့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားချင်တယ်။ "
"ဒီနှစ်မပြည့်စုံတဲ့သံစုံတီးဝိုင်းနဲ့တွဲဖက်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းသံပြိုင်အလေ့အကျင့်ကိုပြန်လည်စတင်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့်မင်းကို Aplico ခန်းမကြီးမှာခဏထိုင်ပြီးအသံတေးဂီတကိုရည်ညွှန်းတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုသုံးပါ။ ကူးစက်မှု။ အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
မစ္စတာယိုရှီဒါစန္ဒရား© KAZNIKI သို့ ဦး တည်နေသည်
Répétiteurသည်စန္ဒယားပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအော်ပရာလေ့ကျင့်စဉ်တွင်တွဲဖက်ကစားလေ့ရှိပြီးအဆိုတော်များကိုလည်းသီဆိုရန်သင်ကြားပေးသည်။သို့သော်ထိုသို့ပြောရခြင်းမှာ“ နောက်ကွယ်မှနောက်ကွယ်မှ” သည်ဖောက်သည်များ၏ရှေ့တွင်ပေါ်မလာပါ။ဘာကြောင့်Répétiteurကိုရည်မှန်းချက်ထားခဲ့တာလဲ။
"ငါအငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါသံပြိုင်ပြိုင်ပွဲများတွင်စန္ဒရားပူးတှဲတီးခတ်, ငါသီဆိုပူးတွဲပါချစ်ခြင်းမေတ္တာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကငါ့ကိုဆုံးမသွန်သင်သောဂီတဆရာ," ဒုတိယသင်ခန်းစာထဲကနေခဲ့ အနာဂတ်မှာဒုတိယ session ပါ။ ဒါဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ "ဒါကငါ "ပူးတွဲပါစန္ဒယားပညာရှင်" ၏အလုပ်အကိုင်သတိထားမိပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ထို့နောက်ဒုတိယအထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ် Shoragawa ရပ်ကွက်ရှိ operetta ဖျော်ဖြေပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် Colle Petitur နှင့်အဆက်အသွယ်ရခဲ့သည်။သူသည်စန္ဒယားတီးနေသည်သာမကဘဲသူသည်အဆိုတော်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စပယ်ယာကိုသူ၏ထင်မြင်ချက်များကိုပေးသည်ကိုမြင်သောအခါတုန်လှုပ်သွားသည်ကိုကျွန်မမှတ်မိသည်။ "
"အဲဒီအချိန်မှာငါဟာအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်မလား၊ ကောလိပ်မှူးဖြစ်ချင်သလားလို့တွေးနေတုန်းပဲ။ ငါကျောင်းတက်တုန်းကဒုတိယသက်တမ်းအတွက်သံပြိုင်အဖြစ်ငါစင်ပေါ်မှာအမှန်တကယ်ရပ်နေစဉ်အော်ပရာဘယ်လိုပုံဖော်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ခဲ့တယ်" စန္ဒရားတီးခတ်သူသည်ရုတ်တရက်လာမည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်စန္ဒရားတီးခတ်နိုင်ကြောင်းသိသောဝန်ထမ်းများကရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်ကိုအစားထိုးအဖြစ်ကစားရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းငါ Korepetitur တွင်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည်။ "
အဆိုတော်တစ် ဦး အနေဖြင့်စင်မြင့်ပေါ်တက်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံသည်ရာထူးအမျိုးမျိုးမှလူများကပြုလုပ်သောအော်ပရာအနုပညာတွင်ပါဝင်ခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။Répétiteurအနေဖြင့်သင်၏အလုပ်၏ဆွဲဆောင်မှုသည်အဘယ်နည်း။
"အရာအားလုံးထက်ပိုပြီးလူတွေနဲ့အတူတကွဖန်တီးတာဟာပျော်စရာကောင်းတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သဘောမတူတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့တစ်ခုကအရာရာတိုင်းကိုလုပ်တယ်။ အစားထိုးလို့မရတဲ့ရွှင်လန်းမှုရှိတယ်။ "နောက်ကွယ်မှာ" ရှိပေမယ့် "နောက်ကွယ်နောက်ကွယ်မှ" ၏အရေးပါမှုနှင့်အရေးပါမှုကိုယခင်ကသံစုံတီးဝိုင်းအဖြစ်ရှေ့မှောက်၌ရှိသောကြောင့်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခြင်းကိုဂုဏ်ယူသည်။
"Yoshida P" မွေးဖွားခြင်းသမိုင်း
ယခုသူသည် Collepetiteur ထုတ်လုပ်မှုသာမကအော်ပရာကိုလည်းထုတ်လုပ်နေသည်။
Aplico Small Hall မှာ "La La Carte" အလုပ်မှာငါက Yoshida P လို့ခေါ်တယ်။ ငါ P သည်စန္ဒယားပညာရှင်နှင့်ထုတ်လုပ်သူနှစ် ဦး စလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုထင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မင်းသည်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်လိုလျှင်မိမိကိုယ်ကိုထိုနည်းဖြင့်“ ထုတ်လုပ်သူ” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသော“ ထုတ်လုပ်သူ” ဟုခေါ်ဆိုသည် ငါခေါင်းစဉ်ထည့်လိုက်တယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သင်သည်“ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိသောဝါရာဂျီ” ကိုအထင်အမြင်သေးပုံမပေါ်ပေ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ဂီတလောကတွင်အလုပ်အကိုင်များစွာရှိသောလူများစွာရှိသည်။ငါသည်လည်းထိုသို့ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, သင့်လျော်သော "waraji" ဝတ်ထားဆက်လက်ချင်တယ်။ "
"အနုပညာရှင်တွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေစဉ်၊ ဒီလူနဲ့ဒီလူကိုတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမွေးဖွားလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကလည်းအများကြီးပါ။ ငါစင်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ပဲပါ ၀ င်ခဲ့ပါစေငါနားမလည်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တာကအစပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါရိုက်တာ Misa Takagishi ကငါဘာကိုနားမလည်ဘူးဆိုတာငါပြောဖို့ပြောတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကပိုပြီးလွယ်ကူလာတယ်။စင်မြင့်သည်ကျွမ်းကျင်သူအမျိုးမျိုးတို့၏စုရုံးမှုဖြစ်သဖြင့်မည်မျှကူညီနိုင်သည်ကိုအရေးကြီးသည်။ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ရှိဖို့လိုတယ်။ "
ငါသူ့ကိုမေးတဲ့အခါ Mr. Yoshida ကို "Collepetiteur" နဲ့ "Producer" လို့ခေါ်ပြီးသူက "ဒါကအလုပ်ပဲ!"
"ငါကတစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်ချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ လူအမြောက်အများရဲ့အရည်အချင်းတွေကိုဖြန့်ဖြူးချင်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အင်တာနာကိုဖြန့်ပြီးလူအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်လူတွေကိုငါကြိုက်တယ်၊ အလုပ်အကိုင် (ပြုံးရယ်) ။ "
ဝါကျ: Naoko Murota
TOKYO OTA OPERA စီမံကိန်းအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
Ota Ward Iriarai XNUMXst မူလတန်းကျောင်းနှင့် Omori XNUMXnd အထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရပြီးနောက် Kunitachi ဂီတကောလိပ်၏အသံဂီတဌာနမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။မီလန်နှင့်ဗီယင်နာတွင်အော်ပရာတွဲဖက်မှုများကိုလေ့လာသည်။ဘွဲ့ရပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်စန္ဒယားပညာရှင်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။Répétiteurအဖြစ်အော်ပရာထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်စဉ်တွင်သူသည်နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ် ဦး ၏ပူးတွဲသရုပ်ဆောင်သည့်စန္ဒယားပညာရှင်အဖြစ်အလွန်ယုံကြည်အားထားခံရသည်။CX "Goodbye Love" ဒရာမာတွင်သူသည်စန္ဒရားညွှန်ကြားမှုနှင့်သရုပ်ဆောင် Takaya Kamikawa ၏ပြန်ဆိုမှုကိုတာဝန်ယူသည်။ ၎င်းသည်ဒရာမာတွင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီးမီဒီယာတွင်ထင်ရှားပြီးလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။
Nikikai စန္ဒယားပညာရှင်၊ Hosengakuenko ပျိုးခင်းစန္ဒရားနည်းပြဆရာ၊ ဂျပန်စွမ်းဆောင်ရည်အဖွဲ့ချုပ်မှအဖွဲ့ဝင်၊ Toji Art Garden Co. , Ltd. ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
x x အနုပညာ + ပျားစျေးဝယ်ခြင်း!
"Old-day guests ည့်သည်များ" ကဖေး
Ota Bunkanomori မှ Usuda Sakashita Dori ၏လက်ျာဘက်၌ 2019 စက်တင်ဘာလကုန်၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော "Old Day Customers" ကဖေးဖြစ်သည်။
ထိုနေရာသည်တစ်ချိန်က Magome Bunshimura မှစာရေးဆရာများလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည့်ရှေးဟောင်းရှေးဟောင်းစာအုပ်ဆိုင် "Sanno Shobo" ဖြစ်သည်။Sanno Shobo ၏ပိုင်ရှင် Yoshio Sekiguchi သည်စာရေးသူများနှင့် Ichii လူမျိုးတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြသည့် "Old Day Customers" စာစီစာကုံးမှကဖေး၏အမည်မှာလာသည်။ပိုင်ရှင်မှာမစ္စတာယိုရှီယို၏သားဖြစ်ပြီးမစ္စနာနိုအိုတိုကီဂူချီဖြစ်သည်။
ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တော့ Magome Bunshimura ကိုတတ်နိုင်သမျှသိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။
Shiro Ozaki ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တံခါးဝမှာ
စာပေဝါသနာရှင်များအကြားတွင်“ Magome Bunshimura” ဟုပြောသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုသိသောလူအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖခင်၏စာအုပ်ဖြစ်သော“ Old Day Customers” သည်လည်းပြန်လည်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Magome Bunshimura တွင်လမ်းလျှောက်သောသူများသည်သူတို့ရှေ့မှောက်တွင်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ထိုအချိန်တွင်ကြည့်ပြီးပါမောက္ခ Shiro Ozaki ၏စာအုပ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့် Magome Bunshimura နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအရာများကိုကြည့်ပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီမှာစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိခဲ့တယ်၊ ထူးဆန်းတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ "
မင်းအဖေ Sanno Shobo ကိုဘယ်တော့စခဲ့တာလဲ
"၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလပဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော့်အဖေက ၃၅ နှစ်ရှိပြီ။ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်နေပုံရတယ်။ စျေးဝယ်ဖို့ဒီနေရာကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီးနာမည် Sanno Shobo လို့ပြောင်းလိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီမှာလိပ်စာက Sanno မဟုတ်ပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကြောင့် Sanno Shobo ဆိုတာငါကြားတယ်။ အဖေက Tenryu Iida လို့ခေါ်တဲ့မြို့ကပါ။ Nagano စီရင်စုရှိမြစ်ရေစီးဆင်းသည်။ ငါဟာဂျပန်အဲလ်ပ်တောင်တန်းကိုကြည့်ပြီးကြီးပြင်းလာတယ်။
သူ့အဖေကဒီမှာဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါ Magome Bunshimura သတိထားမိလား။
"ငါသိတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကစာပေဆရာတွေနဲ့သွားမယ်လို့မထင်ဘူး။ ရလဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာစတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်မှုကြောင့်မစ္စတာ Shiro Ozaki ကိုကျွန်တော့်ကိုအလွန်ချစ်ဖို့လာတယ်။ ထို့အပြင်ငါသည်ထုတ်ဝေသူများကဲ့သို့ Magome သာမကဘဲဝတ္ထုရေးဆရာများစွာနှင့်လည်းသိကျွမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အဖေသည်တကယ်ကံကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ "
ပိုင်ရှင်များသည် Naoto Sekiguchi နှင့် Mr. နှင့် Mr Element တို့ဖြစ်သည်
"Showa ခေတ်မှ ၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စာမထုတ်မီစာပေများ၏တန်ဖိုးသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာသည်။ စာအုပ်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Jimbocho ရှိအဓိကသုံးသောစာအုပ်ဆိုင်များသည်သူတို့ကိုဝယ်။ စင်ပေါ်တွင်တင်လိုက်သည်။ စျေးနှုန်းတက်သည်။ ကျွန်တော့်အဖေကဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြင်းထန်စွာငိုကြွေးနေပါတယ်။ အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါဖောက်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေတာကြားတယ်။ "တစ်စက္ကန့်စာအုပ်ဆိုင်သည်စာအုပ်၏" အရာတစ်ခု "။ အဲဒါဟာ ၀ ိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးပဲ။ ကဗျာဆရာများနှင့်စာရေးဆရာများ၏။ "ကလေးဘ ၀ မှာအထင်ကြီးစရာကောင်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။ "
"၁၉၇၇၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာကျွန်တော့်အဖေဆုံးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၇၈၊ မတ်လမှာဒုတိယအရောင်းဆိုင်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကဂိုတာဒါမှာအောက်မေ့ဖွယ်စျေးကွက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆိုင်မှာစာအုပ်တွေအားလုံးကိုငါစွန့်ပစ်လိုက်တယ်။ Sanno Shobo ၏စာအုပ်များသည်နိဂုံးချုပ်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။
သင့်အဖေ၏စာအုပ်“ Old Day Customers” အကြောင်းပြောပြပါ ဦး ။
"နှစ် ၆၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ငါရေးသားခဲ့တဲ့စာကြောင်းတွေကိုအတွဲတစ်တွဲတည်းအတူတကွစုစည်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထုတ်ဝေဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာကျွန်တော့်အဖေကကင်ဆာရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီးဘဝတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်ကနှစ်လပဲရှိပါသေးတယ်။ ဆေးရုံမှာကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနိုဘူရူရာမာတာကာနဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအမည်ကိုမပြောပြတဲ့အဖေ့ကိုသူရေးဖို့ပုံပြင်အနည်းငယ်ကျန်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Yamataka ဟာသစ်သားတုံးကြီးကိုရှေ့မျက်နှာစာမှာထားခဲ့ပြီးကျွန်တော့်အဖေကအပြုံးနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်။ Maruyama ကာကွယ်ဆေးဟာသက်တမ်းကိုသက်ရောက်စေနိုင်တယ်။ ငါးလကြာပြီးတဲ့နောက်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်။ ငါးရက်အကြာမှာသြဂုတ်လ ၂၂ ရက်။ ကျွန်ုပ်၏မွေးနေ့ (၆၀) တွင်စာရေးသားခြင်းကိုကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ အဖေဆုံးပြီးနောက်တစ်နှစ် ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် Megumi Omori ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ သတို့သား၏စောင့်ဆိုင်းခန်းထဲသို့ ၀ င်လာပြီးစားပွဲပေါ်အသစ်စက်စက်အသစ် completed ည့်သည် find ည့်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ အခမ်းအနားကိုကျွန်ုပ်နှလုံးထဲ၌ ၀ င်လိုက်သည်။ အခမ်းအနားပြီးနောက်အုပ်စုပုံတစ်ပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ ဝင်းဝင်းကအဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်။ “ မင်းအားလုံးကောင်းပြီလား?” ဓာတ်ပုံဆရာထူထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါဒူးထောက်ပြီးနှောင့်ယှက်မှုနဲ့အရွက်အရွက်တွေလဲကျသွားတယ်။မင်းကြည့်လိုက်ရင် ginkgo အရွက်ပဲ။ဒီအမှတ်တရဓာတ်ပုံထဲမှာ ginkgo biloba ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကျွန်မအံ့သြသွားတယ်။ "
"Old Day ဖောက်သည်များ" ပထမ ဦး ဆုံး Edition ကို
အိုး ginkgo ငါ့အဘ ...
"ဒါမှန်တယ်။ Ginkgo biloba နဲ့ကလေးလေး Ginkgo တို့ကငါ့အဖေရဲ့ haiku ပဲ။ မကြာသေးခင်ကငါ ginkgo သစ်ပင်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာငါတွေးမိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ Megumi ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုသွားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ginkgo သစ်ပင်မရှိဘူး။ လူအိုတစ် ဦး ရှိခဲ့သည်။ ဘယ်သူကသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာလဲ၊ ကျွန်တော်က "၁၉၇၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကဒီမှာ ginkgo သစ်ပင်ရှိသလား?" ငါမေးခဲ့တယ်။ ငါအဲဒီမှာရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ ginkgo သစ်ပင်ကိုမမှတ်မိဘူး။ဒီ ginkgo အရွက်ကဘယ်ကလဲ။လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့မခံစားရ။အထက်မှတိုက်ရိုက်ကျသည်မှပြိုလဲသွားသည်။ထို့အပြင်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး တည်းသာရှိပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မှလဲကျသောအရွက်မရှိပါ။သူတို့ထဲမှတစ်ယောက်သာကျွန်ုပ်၏ပေါင်ပေါ်သို့ကျလာသည်။ငါ့ရဲ့အဖေဟာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်လာတယ်၊ သူကကျီးကန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲ။ "
ပါမောက္ခ Kazuo Ozaki * 1 ကထိုနှစ်ဂျပန်စာစီစာကုံးဆုကိုထောက်ခံခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံး“ Old Day Guest ည့်သည်” ကို Phantom စာအုပ်ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဝေသည့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု ၁၀၀၀ သာရှိသည်။ ထို့အပြင်စာအုပ် ၃၀၀ ခန့်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သူများအားပေးခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့စာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်အဖေ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Jimbocho ရှိ Sancha Shobo တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးပါမောက္ခကာဇူအိုဇာကီ * ကထိုနှစ်၏ဂျပန်စာစီစာကုံးဆုကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ထိုဆုရရှိထားသူများသည်အသက်ရှင်နေရမည်။ ကျွန်ုပ်ထိုသို့မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူကပြောကြားခဲ့သည် ငါပြောတာကသူပြောတာကိုသူအသိအမှတ်ပြုတာပဲ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်၊
"သူကပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်မလွှတ်ပေးဘူး။ ပိုင်ရှင်သေသွားပြီ။ ငါစာအုပ်တွေစုစည်းတာမဟုတ်ရင်တစ်ပတ်ရစ်စာအုပ်ဆိုင်ကိုမသွားနိုင်ဘူး။ ငါဒုတိယဆိုင်စာအုပ်ဆိုင်ကိုသွားရင်တောင်ငါစာအုပ်ထဲမှာထည့်ထားရင်ကောင်းမယ်။ " ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကိုမိနစ် ၃၀ တွင် ၀ ယ်လိမ့်မည်။ စျေးသည်ယန်းထောင်သောင်းချီပြီးပုံရသည်။ သင်တွေ့ရှိလျှင်ပင် ၀ ယ်နိုင်သောသူအရေအတွက်ကန့်သတ်သည်။ လူငယ်များသည်၎င်းကိုမတတ်နိုင်ကြပါ။ ငါကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေချင်တယ်။ "
"Old Day ဖောက်သည်များ" ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
အခုတော့ငါမင်းရဲ့ဖခင်ရဲ့ ၃၃ နှစ်မြောက်နှစ်ဖြစ်တဲ့ "Old Day Customers" ကိုပြန်လည်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းမေးချင်ပါတယ်။
Nishi-Ogi Bookmark လို့ခေါ်တဲ့ "Old Days Customers - Reading" –Omori Sanno Shobo Monogatari - ဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော် ၃၃ ကြိမ်မြောက်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးကျွန်တော့်အဖေ၏ ၃၃ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်၏အိပ်မက်သည်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာ ၂၀၁၀၊ ဇွန်လကုန်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သို့သော်လည်း Natsuhasha အမည်ရှိကြေညာသူတစ် ဦး ထံမှကျွန်ုပ်သည်နူးညံ့ပြီးယဉ်ကျေးသောစာအိတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ထို့နောက်ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်မှု၏ဇာတ်လမ်းသည်အလွန်မြန်သောနှုန်းဖြင့်သွားခဲ့သည်။ကျွန်တော့်အဖေကွယ်လွန်သွားတဲ့နှစ်ပတ်လည်လောက်မှာဒုတိယစာမူကိုရေးခဲ့ပြီးနောက်နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်စွဲပါစာတန်းကိုလှပတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို Jimbocho ရှိ Sanseido အဓိကစတိုးဆိုင်ရဲ့အထပ်အားလုံးမှာစုဆောင်းခဲ့တယ်။အဲဒီမြင်ကွင်းကိုအမေနဲ့တွေ့တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ "
* 1: Kazuo Ozaki, 1899-1983 ။ဝတ္ထုရေးဆရာ။မီစီရင်စုတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။Akutagawa ဆုအားသူ၏တိုတောင်းသောဇာတ်လမ်းစုဆောင်းမှုအတွက်ရရှိခဲ့သည်။စစ်ပြီးကာလကိုကိုယ်စားပြုသူတစ် ဦး ကပုဂ္ဂလိကဝတ္ထုစာရေးဆရာ။ကိုယ်စားပြုအလုပ်များမှာ "Shinki Glasses", "Various Insects" နှင့် "BeautifulaCemetery မှ View" တို့ဖြစ်သည်။
Retro-looking cafe "Old-fashion guests ည့်သည်များ"
တည်နေရာ - ၁-၁၆-၁၁ အလယ်၊ တိုကျို
Tokyu ဘတ်စ်ကား "Ota Bunkanomori" တွင်ဝင် / ထွက်ပါ
အားလပ်ရက်များ / ပုံမှန်မဟုတ်သောအားလပ်ရက်များ
အီးမေးလ် / sekijitsu.no.kya9 ★ gmail.com (★→ @)
"Surface Adventure-Abstract Barokisum" ပြပွဲ
မတ်လ ၁၅ ရက် (တနင်္လာနေ့) မတ် ၂၈ ရက် (တနင်္ဂနွေ)
13: 00-19: 00 (နောက်ဆုံးနေ့ 17:00 တိုင်အောင်)
Katayanagi Gakuen ပြခန်း Ko
(၅-၂၃ မှ ၂၂-၂၂ အထိ Nishikamata၊ Ota-ku, Tokyo 5F၊ Katayanagi Gakuen အဆောက်အအုံအမှတ် ၁၂)
Surface Adventure ပြပွဲအမှုဆောင်ကော်မတီ
Kumagai Tsuneko အောက်မေ့ရာခန်းမ ၃၀ နှစ်မြောက်ပြပွဲ (နှောင်းပိုင်း)
"စာလုံးအလှရေးနည်း Hitsuji နှင့်ဆက်စပ်သော Tsuneko"
အခုကျင်းပနေ - တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီလ 4
9: 00-16: 30 (ဝင်ခွင့် 16:00 တိုင်အောင်)
* ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်အခမဲ့ (လက်မှတ်လိုအပ်သည်) နှင့် ၅ နှစ်အောက်ကလေးများ